Inweta Ntughari aka ahia gi na SEO
Ọ bụla azụmahịa obodo nwere ike ịga nke ọma na-enwe ọnụọgụgụ n'Ịntanet maka ịbata ndị ọbịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị oké mkpa ka ụlọ ọrụ jikọọ atụmatụ ahịa ahịa nke obodo na-eme ka ọtụtụ ndị nleta maka ebe nrụọrụ weebụ ha. Ulo oru ndi na-aga nke oma hibere isi ma tinye na mpaghara SEO oru iji kwado usoro oru ahia ha. Ndị ahịa ahịa dị iche iche na-eji ụzọ dị iche iche agakwuru ndị ahịa ha n'ịntanetị. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta ụzọ dị nchedo ịbịakwute ọtụtụ ndị ahịa ha n'ịntanetị yana ịkwado mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa ha.
Nchọpụta Nchọpụta Mmasị na-arụ ọrụ site n'ịbawanye ogo nke weebụsaịtị yana ịme ka ebe nrụọrụ weebụ mara ndị ahịa - Cassandra Business Intelligence. Mgbe mkpokọta weebụ na-enweta ọkwa dị elu na search engine , enwere ike ịnweta ọtụtụ n'ime ntinye ọnụego na engines ọchụchọ. Ọrụ SEO dị iche iche na-enye usoro nkwụsị dị mma iji mee ka ndị ọrụ na-asọ mpi n'ụzọ dị mma. Michael Brown, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Ọrụ, na-enye gị ka ị lee ụfọdụ n'ime ụzọ ndị nwere ike ime ka SEO gị nwee ihe ịga nke ọma:
Ọ dị mkpa ịtụle nyochaa nke ebe nrụọrụ weebụ gị na ngwaọrụ mkpanaka..Dịka ịntanetị, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ nchọgharị site na iji ekwentị. Nchọgharị ọchụchọ na-ahọrọ ịtọ saịtị ndị nwere nhazi ihuenyo n'ihu ndị na-enweghị ya. N'ọtụtụ ọnọdụ, saịtị ndị nwere netwọk mobile na-erite uru n'ihi mkpa ha na ndị na-ege ntị yana inwe ọganihu dị mma UX. Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke nwere interface enyi na enyi na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụmahụ mara mma nke onye ọrụ. Ihe a na-akwado njirimara ọdịnaya gị nakwa dị ka ihe zuru ezu na mkpuchi isiokwu ahụ.
Mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị kachasị maka iji, ịdị mfe bụ isi ihe ị ga-atụle. Ebe nrụọrụ weebụ dị mfe na-eme ka ọ dị mfe iru n'akụkụ dị iche iche ma mee ọtụtụ oku na-eme ka bọtịnụ rụọ ọrụ. Ụlọ ọrụ na-aga nke ọma nwere weebụsaịtị dị mfe nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchọta ọdịnaya ha. A ga-enwe nchịkọta nhọrọ dị mfe iji mee ka ndị ọrụ chọta ọrụ dị mkpa. Ọ dị mkpa iji hụ na ozi azụmahịa ahụ ziri ezi na nke ziri ezi. Ọtụtụ ndị ahịa na-aga na ebe nrụọrụ weebụ iji chọta ihe ndị dị mma na ihe ndị ha chọrọ. Usoro nke ịchọta ozi a ekwesịghị inye nsogbu ọbụla na onye ọrụ nke dị na saịtị gị.
E nwere ọtụtụ ụzọ na enyemaka nke ị nwere ike isi rite uru na weebụsaịtị. Nke mbụ, enwere ndị ọbịa ọhụụ kwa ụbọchị na-achọ isiokwu ndị dị na consoles search engine. Site na ọrụ SEO dị irè, ọ ga-ekwe omume mee ka ebe nrụọrụ weebụ bara uru karịa ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị ọbịa na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Nchọpụta Nyocha Search gụnyere ihe niile dị mkpa nke na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ nweta ụdị ihe ịga nke ọma. Nke a SEO ndu nwere ike ime ka saịtị gị rịa elu iji nwee ọnọdụ kacha elu na SERPs. Ị nwere ike nwee ike ịmepụta ọrụ SEO mpaghara maka saịtị gị n'otu oge ahụ ka ọ zaa.